Ị nwere ike igosi m otu m ga esi esi nweta backlinks na-enweghị ihe mgbu na ọkwa m?
Tupu igosi gị otu esi enweta backlinks ụzọ kachasị mma na n'enwetaghị onwe gị nnukwu ụgwọ ọrụ ogo, ka anyị tinyekwuo n'ime ihe ahụ. O nweghị ihe ọ bụla ị ga-ekwu na ị kwesịrị ịzụlite njikọ dị mma iji budata okporo ụzọ ọchụchọ ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog gị. O nwekwara ike ịbụ ọrụ kachasị dị ịrịba ama ma ka dị oke ọhụụ ma dị oke mkpa iji 'nweta' ndị kwesịrị ekwesị backlinks na ọdịnaya gị. Ya mere, onye ọ bụla kwesịrị ịmepụta ihe dị ukwuu iji mepụta njikọ dị iche iche, n. e. , ụzọ kasị dịrị nchebe. Ma ajụjụ ahụ ka dị - esi enwetaghachi backlinks na akwụkwọ odide gị mara mma, nyere gị ka ị na-adọta ndị na-ege ntị ma na-adọta ya na weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị, ị ga-enwerịrị inwe ezigbo njikọ njikọ - nanị iji dọtakwuo ndị ọzọ ndị ọbịa na-ekwe ka ha jikọọ gị?
Ọdịnaya bụ Eze - Na - aga n'ihu
Ọ pụtara na i kwesịrị ime ihe ngwa ngwa wee malite ịrụ ọrụ na ọdịnaya gị pụrụ iche ma dị mkpa ugbu a. Mana ịchọrọ ịmara otu esi enwetaghachi backlinks n'enweghị ihe ọ bụla ka i wee ghara ichegbu onwe gị gbasara mmetụta ndị nwere ike ịmepụta na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog, nri? Ka anyị chee ya ihu - izere ntaramahụhụ ndị metụtara njikọ ụlọ njikọ na-ejikọtaghị ọnụ gị - ọ bụ ihe niile gbasara ị nweta akwa backlinks dị elu ma na-ahụkarị. Ọ pụtara na ịnweta ezigbo azụ backlink na ederede arịlịka nke ọma nke etinyebere na ihe ndị ọzọ nwere ike ịtụkwasị obi na nke dị mkpa maka ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ịzụ ahịa - agaghị abara gị ụgwọ. Ọ na-abịa n'ekwughị na a ghaghị izere ụgwọ ọ bụla a kwụrụ ụgwọ, mgbanwe ma ọ bụ nnukwu ụlọ njikọ ọ gwụla ma ịchọrọ ịtọlite ​​ọkọlọtọ ọkọlọtọ na Google ma nweta onwe gị oke nkwụghachi ụgwọ na-enweghị atụ.
Nke a bụ otu esi nweta backlinks nke elu-elu iji nwee obi ụtọ na - eme ka okporo ụzọ weebụ dịkwuo ụba - àgwà dị mkpa ọ bụghị nanị inwe obi iru ala ma ọ bụ iji jee ozi gị nke ọma ịmegharị ọrụ gị dum na njedebe ụwa ya na SEO na ọnụ ọgụgụ. Ya mere, n'okpuru ebe a, m ga-edepụta gị ụzọ abụọ kachasị mma nke nwere ike inye aka n'inweta ihe dị mma - n'ezie, ọ bụ maka iji njikọ njikọ.
Nwee Obi Ụtọ Page Ọdịnaya Na-akwụ ụgwọ site na Ego
Dee ọrụ iji nweta freelancers - gbalịa ịchọta ndị isi edemede ọkachamara n'ime niche gị. Ọ bụghị echiche efu - mgbe niile, inwe ihe niile dị na ebe a na-ahazi ya maka mkpa gị kwesịrị ịkwụ ụgwọ. Ma ọ dịkarịa ala maka mmalite, ruo mgbe ị ga-enwetatụ ike na ị ga-enwe ike ijikwa ụfọdụ ihe dị mma n'enyeghị enyemaka nke atọ.Ntughari: Okwesighi igbapu ya na ndi mmadu ndi ozo, i ghaghi ime nwayo nwayo ma malite mkparita uka ozi oma, ikwalite onwe gi, oru ntanetiri gi, ma n'emefu oge zuru ezu iji nyochaa onye obula akwukwo di nma tupu gi anata.
Nwee ihe dị oke mma - Nye ihe kachasị mma gị na-eji oge eme ihe
N'ikpeazụ, mgbe ị na-enweta ụgwọ backlinks na arụrụ aka gị, ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ekweta na ekwenyeghi na ntinye akwukwo ndi ozo bu ihe nchoputa. Ma nke ahụ abụghị akụkọ dum, enwere m ike ijide gị. Nke a bụ ndepụta dị nkenke maka ebe ị ga - achọpụta n'ọdịnihu:
Gbalịa dee ụfọdụ akwụkwọ ozi ndị ọbịa ka ha wee nweta akara azụ azụ nke sitere na ngalaba bio. Nke ahụ ga-adịrị mma maka mmalite kickass, ma ụzọ a abụghị nke dị irè maka ịtọlite ​​njikọ dị ike.
Tụlee itinye oge gị na mgbalị gị n'ịmepụta ụdị ọdịnaya ndị kachasị egosipụta maka ịkekọrịta na na ijikọta ya, dịka ntuziaka ndị bara uru, nchọpụta ọmụmụ nke onwe gị, ihe ndekọ data na-adọrọ adọrọ, akwụkwọ ntanetị ndị bara uru, wdg.Rịba ama: gbalịa gbanwee otu akụkụ nke ihe dị n'ime gị - ọ dịghị mkpa iji megharịa ụkwụ ahụ, nri?
Na-arụsi ọrụ ike na ịmepụta njikọ siri ike na ntanetị na mgbasa ozi ọha na eze ọ bụghị nanị iji kwalite ihe ndị ị na-enweghị ike ịme ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịmekọrịta ma melite aha gị ma ọ bụ ikike azụmahịa n'oge.
Maka akara azụmaahịa kachasị mma ma ọ bụ na-enweghị ike inweta site na saịtị ma ọ bụ nke gọọmenti na-elu peeji nke elu PageRank ma jikọta ịdị arọ, tụlee ịmepụta akwụkwọ, ịgba ọsọ, ma ọ bụ ọbụna nkwupụta obi ike - na-enye ha otu isiokwu a kapịrị ọnụ karịsịa kpọmkwem ihe ha chọrọ ịnụ. Cheta, ihe ndị dị oké ọnụ ahịa na ndị dị nchebe abụghị naanị ego mgbe niile Source .